Llaqtaypa Riymaynin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2019 17:14 GMT
Hijery an'i Haquira anaty sarintany lehibe kokoa.
Toejavatra iray mahazatra loatra manerana an'i Però izy ity. Mifindra monina mamonjy ireo tanandehibe ireo mponina any ambanivohitra mba hitady fanabeazana sy asa tsaratsara kokoa. Raha ny momba ireo mponina avy ao amin'ny Distrikan'i Haquira ao Apurimac, Però, ny ady mitampiadiana ao anatiny dia mandray anjara betsaka koa amin'io fikisahana tsy mitsahatr'ireo mpifindra monina io, izay mandao ny toerana nahaterahany. Matetika ny mizatra fiainana vaovao dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fomba amam-panao. Raha toa ireo mponina miisa 1.000 tao an-toerana avy ao amin'io faritra io, izay any Lima renivohitra ankehitriny no mipetraka, ka nanao ezaka mba hitahirizana ny sasantsasany tamin'ny fomba amam-panaon-dry zareo, toy ny famerenana mankalaza ireo fety nentindrazany sy fihazonana ny fomba fanao amin'ny fanaovana asa iombonana, tsy nahita fahombiazana tahaka izany kosa ny fitahirizana ny tenindrenin-dry zareo, Quechua, ao anaty tontolon'ny tanandehibe.
Kendren'ny tetikasa Llaqtaypa Riymaynin (Feon'ny Vondrom-piarahamoniko) tarihan'i Irma Alvarez Ccoscco ny hampiasàna ny teknolojia sy ny median'olontsotra mba hanomezana aina vao ilay teny ao anatin'io vondrom-piarahamonina an-tanandehibe io. Araka izay nosoratany ao anatin'ny fanazavany, “Tsapako fa tena iainkinan'ny ain-dehiben'ireo mpiteny azy ny teny Quechua any an-tanandehibe satria fomba iray hitazonana ny maripamantarana ny tena mba haharitra.” Alvarez, ankoatry ny asa tsy itandroany hasasarana amin'ny fandikàna ireo rindrambaiko fampiasa malalaka ho amin'ny teny Quechua, no iray tamin'ireo mpamorona ny kaonty Twitter Hablemos Quechua (@hablemosquechua).
Niarahany niasa tamin'ny Escuelab, ivontoerana iray ifandrimbonana sy fianarana ny teknolojia ao Lima, hitily tanora avy amin'ireny vndrom-piarahamonina ireny ilay tetikasa, tanora manana fahalinana amin'ny fanamafisana ny fifamatorany amin'ny teny Quechua amin'ny alàlan'ny fampiasana ny media iarahana miasa. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay rindrambaiko maimaimpoana Audacity, fampiasa iray manana loharano misokatra fandraketana sy fikiràna feo, dia handrakitra fandaharana sy tantara fohy ireo mpandray anjara, ho atao amin'ny teny Quechua. Hakarina ety anaty aterineto ireny rakipeo ireny, ary hozaraina ihany koa amin'ireo foiben'onjampeom-piarahamonina miasa ho an'io vondrom-piarahamonina io.
Tanjona iray farany ny hiverna any amin'ireny vohitra ireny miaraka aminà ohatra avy amin'ity ezaka ho fanomezana aina vao ny teny ity, na dia miaina any amin'ny an-jato kilaometatra lavitra aza. Ampian'i Alvarez hoe ny fanantenana dia “mba hahita izay maripamantarana azy sy ny teny voalohan-dry zareo any anaty fitaovana TIC ireo mpifindra monina, ary inona indray moa no tsara kokoa miohatra amin'ny hoe famelàna azy ireo hiteny ho azy ireo (izy samy izy).”
Tranonkala: Llaqtaypa Rimaynin
Tetikasa Soundcloud: Audio
Bilaogin'ny tetikasa: Llaqtaypa Riymaynin RSS